Vhiki 1 DQ 1 Simba reVazhinji Tarisa Kubva kumawere Kunzwisisa kurongeka kwenharaunda. Funga nezve chirevo chemuAfrica Chishongo chimwe hachiwirirane. Kurukurai maitiro eshanduko yemagariro uye nerubatsiro (30% off)
Vhiki 1 DQ 1 Simba reVazhinji Tarisa Kubva kumawere Kunzwisisa kurongeka kwenharaunda. Funga nezve chirevo chemuAfrica Chishongo chimwe hachiwirirane. Kurukurai maitiro eshanduko yemagariro uye nerubatsiro
Vhiki 1 DQ 1 Simba reVazhinji - Tarisa Kubva kumawere- Kunzwisisa kurongeka kwenharaunda. Funga nezve chirevo chemuAfrica Chishongo chimwe hachiwirirane. Kurukurai maitiro eshanduko yemagariro uye nerubatsiro rwekuronga pamwe chete kuitira shanduko pamusoro pekuedza kwemunhu. Verenga nezve nzira idzo dzinogona kutorwa kuti dzifambise mberi shanduko yemagariro. Kurukura nzira mbiri kana nhatu dzinoratidzika sedzinonyanya kufanira kana dzinoshanda kwauri. Tsigira zvaunotaura nezvitupa uye pindura kune mashoma maviri evatambi vekirasi 'kutumira.
Kana paine nyaya dzakatenderedza uye mukati memunharaunda, kuve nemasangano emunharaunda musangano mukuru nzira yekukurukura navo uchisanganisira wese munhu. Kuve nesangano renharaunda inzira huru yenharaunda yekuona kuti vane zvinhu zvakanaka...
12.83 KB (0.01 MB)